I-Xiaomi ifikelela kwi-100 yezigidi zeefowuni ezithengiswa kwihlabathi liphela | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ukwanda kweXiaomi kwilizwe liphela kwaqala kunyaka ophelileyo. Kulapho ifemu yangena kwiimarike ezinje ngeSpain, apho sele ivule inani elikhulu leevenkile. Ukongeza, ifemu ilawula ezinye iimarike ezinje nge-India, ebaluleke kakhulu kwinqanaba lokuthengisa. Ke ngoko, ekuqaleni konyaka babeka usukelo lokuthengisa iifowuni ezizigidi ezili-100 lonke ihlabathi
Uphawu lwesiTshayina, olusandula ukubonakalisa isiphelo salo esitsha, Umxube weXiaomi Mi 3, ikwi indlela elungileyo yokufikelela kule njongo yokuthengisa. Ngapha koko, abayi kulinda ixesha elide ukuze bayifumane ngokusemthethweni. Njengoko umongameli wenkampani etyhilile.
Kusasele iinyanga ezimbini ukuba uphele unyaka, Izakuba yiveki ezayo xa uXiaomi efikelela kwi-100 yezigidi zeefowuni ezithengisiweyo Ehlabathini lonke. U-Wang Xiang, usekela-mongameli wenkampani, ebephethe ngokwabelana ngolu lwazi. Into eyenza icace inkqubela phambili elungileyo yenkampani kwintengiso.
Uhlobo lwesiTshayina Kuthathe ixesha elincinci kunokuba bekulindelwe ukufumana ezi ntengiso zizigidi ezili-100 kweefowuni kwihlabathi liphela. Iziphumo ezilungileyo, ezivela njengenxalenye yokuvela kwayo kwintengiso yamanye amazwe. Ke benza inkqubela phambili entle kwiimarike eziphambili.
UXiaomi sele elorhwebo lwesithathu oluthengisa kakhulu eSpain. Ukongeza ekubeni ngowona mthengisi ubalaseleyo, kwimpikiswano engapheliyo yobunkokheli kunye ne-Samsung, e-India. Bathengisa kakuhle e-China kwaye inkqubela phambili yabo eYurophu iyakhawuleza. Ukuvulwa kweevenkile ezintsha kwiimarike ezifana neFrance ne-Itali kuluncedo olukhulu.
Ngokuqinisekileyo kwiveki ezayo kuya kubakho isibhengezo esisemthethweni esenziwe nguXiaomi malunga nokuthengisa. Umzuzu wembali wohlobo lophawu, oluthi Ngale ndlela, idlula ukuthengisa kwe-2017, unyaka apho kuthengiswa iifowuni ezizizigidi ezingama-90. Ukongeza, imihla ephambili enjengeLwesihlanu omnyama okanye iKrisimesi isalahlekile, apho ukuthengisa kuya kunyuka ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Xiaomi » Kuya kuthatha ixesha elingakanani uXiaomi ukufikelela kwi-100 yezigidi zeefowuni ezithengisiweyo?